​Weerar lagu dilay 10 Shacab ah oo ka dhacay Shabeellaha hoose
BARIIRE, Somalia - Ugu yaraan 10 ruux oo shacab ah ayaa lagu dilay weerar ay Ciidamada dowladda Federaalka Somalia iyo kuwa Mareykanka ay ka fuliyeen saaka oo Jimco ah deegaan ku yaalla gobolka Shabeellaha hoose.
Cali Nuur Maxamed, Gudoomiye Kuxigeenka maamulka gobolka Shabellaha Hhose ee dhinaca Amniga, ayaa Warsidaha Garowe Online u xaqiijiyay in weerarka, kaasi oo ka dhacay Beer ku taalla deegaanka Bariire, oo qiyaastii 40KM dhanka galbeed uga beegan Muqdishu.
Wuxuu Cali sidoo kale u sheegay GO in Ciidamada Mareykanka ay beertaasi ku dhex dileen 10 nin oo waardiye ka ahaa Beerta, kadibna ay horey u sii kaxeysteen tiro kale, oo ay ku qaateen Diyaaradaha Helicopters-ka.
"Beerta la weeraray ayaa waxaa la sheegay inuu leeyahay nin dadka deegaanka Bariire katirsan, oo lagu magacaabo Xuseen Tabliiq, illaa haddana mana naqaano sababta loo weeraray Beertiisa iyo sababta ka dambaysa dilka shacabka," ayuu yiri Cali Nuur.
Magacyada dadka ku dhintay Weerarka:
Deegaanka Bariire ayaa la wareegay Ciidamada Dowladda Somalia, oo garab ka helaya AMISOM iyo kuwa Mareykanka Todobaad kahor, kadib duulaan wadajir ah, oo ay ku qaadeen Dagaalyahanadii Al shabaab-ka ee halkaasi ku sugnaa.
Ciidamada Mareykanka ee weerarkan fuliyay waxaa la sheegay inay degan yihiin Saldhiga Balli-Doogle, oo aan ka fogeyn Bariire, halkaasi oo inta badan ka qaadaan weerarada ka dhanka ah Kooxda Al shabaab.
Dowladda Federaalka Somalia wali kama aysan hadlin weerarka lagu xasuuqay dadka shacab ah, balse Xildhibaano katirsan Barlamanka dalka ayaa cambaareeyay falkaasi, kuna baaqay in baaritaan lagu sameeyo.
Gudiga Xaqiiqa-raadinta DFS oo gaarey Deegaanka Bariire
Soomaliya 28.08.2017. 14:31
BARIIRE, Somalia - Gudiga xaqiiqa-raadinta dowladda Federaalka ay u xilsaartey baaritaanada weerarkii Bariire ayaa maanta gaarey deegaankaasi, xi ay usoo ogaadaan xaqiiqda dhabta ah ee dadkii la dilay waxay ahaayeen, iyo qaabka uu ku dhacay weerarka.
Siyaasiyiin dhacdadii Bariire ka dhigtay Hub ay kula dagaalaan dowladda
Soomaliya 31.08.2017. 12:12
​Madaxda Qaranka oo ku kala qeybsamay Weerarkii Bariire
Soomaliya 26.08.2017. 12:11
​Galmudug oo si carro leh uga hadashay Weerarkii Bariire [Dhageyso]
Soomaliya 27.08.2017. 19:10
Dagaal iyo duqeyn xoogan oo ka dhacay Shabeellaha Hoose
Soomaliya 12.03.2019. 08:35
Wasiir iyo Xildhibaan lagu dilay qarax ka dhacay duleedka Muqdisho
Soomaliya 08.03.2018. 01:32
Al-Shabaab oo duqeyn looga dilay 100 dagaalame
Soomaliya 24.02.2019. 13:52